Pejy fandokoana traktera pejy fandokoana maimaim-poana
Pejy fandokoana traktera
Ny zazalahy manokana indrindra dia variana amin'ny fiara "hum-hum" amin'ny sokajin-taona rehetra. Mety tsy noho izy ireo liana tamin'ny haitao taloha, fa satria ny mitondra fiara dia mifamatotra amin'ny zavatra manaitaitra ihany koa. Ary ny fiara vaventy be dia be no mahavariana.
Antony ampy ahafahanay manolotra ny sokajy misy anay miaraka amin'ny sarin'ireo traktera. Mikaroha amin'ny alàlan'ny fanangonana pejy fandokoana traktera maimaimpoana ho anay. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny traktera tsirairay avy Pejy fandokoana. ​
Ento ny traktera